Garmin Forerunner 10, ihe elekere GPS maka ịgba ọsọ ma ọ bụ ịga ije | Akụkọ akụrụngwa
Garmin Forerunner 10, ihe nlele GPS maka ịgba ọsọ ma ọ bụ ije ije
Na ahịa nke nche egwuregwu Enwere ọtụtụ nhọrọ ịhọrọ site na, na mgbakwunye, ọganihu na teknụzụ emeela ka ọ nwee ike ịbelata ọtụtụ akụrụngwa ka anyị wee nwee ike iyi a GPS ma nyochaa data dị iche iche metụtara ahụ anyị.
N'ihi na onye ọrụ na-achọ a nche na-ewu na-GPS ma na-enweghị ọtụtụ nsogbu na a n'ezie oké ọnụ price, na 10 nke na-elekọta Garmin bu ihe edeputara. Garmin bụ ọkachamara n'ọhịa nke igodo na Garmin Jikọọ na ikpo okwu n'ịntanetị na-eme ka anyị nwee echiche zuru ezu banyere usoro ọzụzụ anyị.
1 Unboxing na mmetụta mbụ
2 Na-aga ọsọ na Garmin Forerunner 10
3 Na-eme nchọgharị na nnọkọ na Garmin Jikọọ
Unboxing na mmetụta mbụ
Garmin Forerunner 10 na-abata na obere igbe nke elekere na-ahụ mgbe niile ekele uzo uzo ha kere maka nzube a.
Ozugbo igbe ahụ meghere, anyị ewepụta elekere ma hụ na n'ime ya, enwerekwa akwukwo na odori isi na njikọ USB na anyị ga-eji fanye ma mekọrịta ihe Garmin Forerunner 10.
Elekere ọ bụ nnọọ ìhè na adapts zuru oke ka shapes nke anyị nkwojiaka. A na-eji mgbaaka mee mgbaaka ahụ ma nwee oghere dịgasị iche iche iji kwekọọ na contours dị iche iche.
Chassis nke nche nwere belata akụkụ ọ bụ ezie na ọ dị ntakịrị, ọnụahịa a ga-akwụrịrị maka ịnweta onye na-enweta GPS na batrị dị n'ime nke nwere ike ịdịgide ruo ọtụtụ oge ọzụzụ.
Ijikwa elekere ahụ dị mfe, maka nke a, Garmin Forerunner 10 O nwere bọtịnụ anọ dị n'akụkụ nke ọ bụla.
Anyị ga-eji nọmba 1 gbanye elekere ma mee ka ọkụ azụ azụ rụọ ọrụ mgbe ọkụ dị ala.
Nọmba 2 bụ nke anyị ga-eji amalite usoro ọzụzụ anyị, n'aka nke ya, a na-eji ya iji gosi nnabata mgbe anyị nọ n'ime menu.
Bọtịnụ 3 bụ nke anyị ga-eji na-agagharị na menu na site na peeji dị iche iche mgbe anyị na-azụ ọzụzụ, yabụ anyị ga-agbanwe data dị iche iche egosiri na ihuenyo
Bọtịnụ 4 na-eji aka akara laps na aka wee laghachi na menu gara aga na-enweghị itinye mgbanwe.
N'ikpeazụ, ọ bụrụ na anyị agbanye elekere anyị ga-ahụ na e nwere kọntaktị anọ dị larịị nke ga-abata na isi mmalite nke a gunyere Site na ha anyị ga-enwe ike ịfefe oge anyị na kọmputa ma fanye batrị ya.
Na-aga ọsọ na Garmin Forerunner 10
Ọ bụ ezie na anyị nwere ike iji nche maka ihe ọ bụla anyị chọrọ, Ezubere Garmin Forerunner 10 maka ndị ọrụ na-apụ maka ịgba ọsọ ma ọ bụ ije ọtụtụ mgbe.
Ọrụ GPS na-arụ ọrụ dekọọ njem anyị n'oge na, n’aka nke ya, na-egosi ebe dị anya anyị n’aga n’ihu elekere.
Iji malite nnọkọ anyị, pịa bọtịnụ bọtịnụ 2 (nke ejiri akara bebi akara), anyị na-eche ka ị nweta ọnọdụ anyị ma anyị kwadoro mmalite ọrụ egwuregwu.
Garmin Forerunner 10 ihuenyo dị obere ma bụrụ naanị egosiputa data abuo n’otu oge. Yabụ, ị ga - pịa bọtịnụ dị n'akụkụ aka nri dị ala iji gbanwee ha. Ya mere, anyị nwere ike ịmata oge anyị na-agba, ogologo njem, njem calorie na ijeụkwụ.
Anyị nwere ike ịkọwapụta ụda ahụ n'aka site na elekere ma ọ bụ usoro kachasị mma mee nnọkọ dika mkpa anyị si dị. Ma ànyị gafere ọsọ ahụ ma ọ bụ n’okpuru, elekere ga-ada ụda ma gosi anyị ozi ịdọ aka na ntị ka anyị nwee ike ịhazigharị ije ije ma ọ bụ ịgba ọsọ.
Ọrụ ọzọ na-adọrọ mmasị bụ Auto Lap, ya, elekere na-etinye aka n'ọhịa akpaghị aka oge ọ bụla anyị gara kilomita iji debe oge ọ ga-ewe anyị ịga ogologo njem ahụ.
N'ikpeazụ, Garmin Forerunner 10 enwe ike ịchọpụta mgbe anyị kwụsịrị ọ ga-akwụsị chrono na akpaghị aka. N’otu aka ahụ, ọ ga-ebido ọzọ ma anyị laghachite na egwu.
Ma ọrụ rhythm, Auto Lap na akpaka ịkwụsịtụ nwere ike gbanyụọ ma ọ bụrụ na ha abaghị anyị uru.
Mgbe anyị gwụchara, pịa bọtịnụ ahụ ọzọ na nwa bebi na-agba ọsọ ma chekwaa ụzọ ahụ. Anyị ga-enwe ike ịhụ data kachasị dị mkpa na akụkọ ihe mere eme na elekere na-echekwa, ọ bụ ezie na ọ dị mma Mekọrịta ya na kọmputa gị site na Garmin Connect platform.
Na-eme nchọgharị na nnọkọ na Garmin Jikọọ
Accessnweta Garmin Jikọọ anyị ga-edebanye aha tupu oge eruo ma jikọọ nche na ọdụ USB nke kọmpụta anyị site na iji ntọala nke ndị nrụpụta nyere.
Anyị na-ebu ọrụ ahụ, anyi hoputara Garmin Forerunner 10 yabụ ị nwere ike wepu data ya na voila, anyị nwere ohere zuru oke na nnọkọ anyị.
N'ime sekọnd ole na ole, anyị ga-enweta ụdị data ahụ bara uru dị ka njem dị anya, oge nke nnọkọ ahụ were, ijeụkwụ, ogo dị elu, calorie ọkụ na amụma ihu igwe ka anyị na-eme egwuregwu.
Site na ihe ndekọ ndị a, ikpo okwu ga-enyekwa anyị a eserese na profaịlụ nke ụzọ na ọzọ maka oge. N'aka nke ya, anyị nwere maapụ nwere ụzọ anyị jere.
N'ime Garmin Jikọọ anyị nwere ihe ọkpụkpọ ọrụ nke na-eme njem anyị na-egosi oge, ngụkọta anya, elu na ọsọ na onye ọ bụla mgbe na-aga. Ọ bara uru karịsịa maka inyocha ọganihu anyị n'oge ọzụzụ zuru ezu.
Garmin Forerunner 10 bụ elekere dị mma maka ndị na-achọ ngwaahịa dị mfe na ọnụ ala ma enwere ike ịnwe ọrụ dịka Garmin Jikọọ.
Ọnụahịa ya akwadoro bụ euro 129 ma enwere ya n'ụdị dịgasị iche iche, na-enwe ike ịhọrọ ahịhịa ndụ, odo odo, pink, ojii ma ọ bụ oroma.
Njikọ - 10 nke na-elekọta Garmin
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » Ngwa » GPS » Garmin Forerunner 10, ihe nlele GPS maka ịgba ọsọ ma ọ bụ ije ije
Nyochaa ahụ dị jụụ, enwere ekele ebe ọ bụ na m na-eche ya nke ukwuu na m ga-azụta otu. Kedu ka oge ya si dị ka elekere yana iji ya eme ihe?
Egwuregwu kachasị njọ nke ọgbọ a, mpịakọta 1
Eprel Nintendo Direct recap